24 Fikradda Fikradaha Fikradda Fikradda loogu talagalay Raga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
24 Fikradda Fikradda Fikradda Fikradda loogu talagalay Ragga iyo Haweenka
Waxaa jira meelo aad u badan oo aad ku dhejin kartid naqshaddaada tattoo oo aad u qurux badan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaybo kale oo jirka ka mid ah oo naqshadeynta tattoo laga yaabo inay isbeddel weyn u yeeshaan sida dhabarka.
1. Gogol-xoqidda dhirta dhirta loogu talagalay haweenka dhabarka
Qolalka aad ka heli kartid alaabtaada waa in dib loo eegaa. Habka ugu fudud ee lagu heli karo macluumaadkan waa marka aad eegto shaqada internetka ee lagu sawiray si aad u aragto. Waxaad booqan kartaa saldhigga haddii aad rabto inaad hesho sawir cad oo ah waxa dhaca.
2. Fikradda dhirta iyo wadnaha wadnaha ayaa fikirkooda ku riday ragga
Heerarka caafimaadka, macaamilada iyo farshaxanku waa qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka fikirto ka hor inta aadan bilaabin naqshadeynta #tattoo #tattoo.
3. Fikradda sawir-celinta ee sawir-celinta sawir-maskaxda loogu talagalay gabdhaha
Weydii su'aalo haddii ay tahay inaad leedahay tattoo dhabarka ah sida tan. Tattoo dhabta ah waa wax aanad iska indha tiri karin markaad aragto.
4. Qalab casaan ah oo loogu talagalay gabdhaha dhabarka
Si aad u hesho tattoo dhab ah sida quruxsan sida tan, waa inaad kaliya su'aalo weydiisataa si aad u hubiso in aad ku sugan jidka saxda ah ee artist. Markaad ku kalsoonaato geedi socodka, markaa waxaad yeelan doontaa raaxo ah inaad dib u hesho tattoo.
5. Malaa'igta qoob-ka-cayaarta tattoo inkir fikradaha macaamiisha dhabarka
Markaad wax iibsato, waa mid aad u fudud in la helo qiimo qumman oo ah tattoo dhabarkaaga. Waa inaad marnaba wax u dhimeyso caafimaadkaaga haddii aad heleyso tattoo dhabarka. Tani waa sababta aad u isticmaali laheyd khabiir tattoo dambe ah.
6. Dhabarjirta iyo ubaxyada tattoo inkastoo gabdhaha dib loo soo celiyo
Waxaa jira khabiiro badan oo ka socda goobtaas si ay u taageeraan dabeecadaada hal-abuurka ah marka ay timaaddo sidan oo kale tattoo-celin dhab ah.
7. Angel iyo moon tattoo dayaxa loogu talagalay haweenka dhabarka
Muddo sanado ah, waxaynu aragnay dadku inay dib u qabteen tattoo maxaa yeelay sida ay u quruxda u tahay maqaarka. Waxaa jira naqshado kala duwan oo la yimaada tattoo dhabarka. Waxaad bedeli kartaa ama bedeli kartaa qaabka tattoo dhabarka u eg.
8. Sawir iyo jilac tifo qurxoon oo loogu talagalay haweenka dhabarka
Waxaa jira dad doonaya in ay u qaabeeyaan tattoo dhabarka si ay u eegaan kuwa kala duwan ee dadweynaha.
9. Naqshad caadi ah ayaa fikrado ku sameeya tattoo fikriga khadka loogu talagalay dhabarka dumarka
Tattoo dib u noqoshada ayaa ah mid isbedel ah oo aan waligood marin sanado badan. Sababta tani waxay sabab u tahay sida ay dadku ula imaanayaan hal abuur leh cajiib ah.
10. Fikradda naqshadaynta naqshadeynta naqshadeynta fikradaha gabdhaha dhabarka
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto midab ama xitaa isku xoqdo sida tattoo dhabarka u egyahay.
11. Girly ubax tattoo ubax loogu talagalay haweenka dhabarka
Qiimaha tattoo dhabarku waa kala duwan yahay. Farshaxanayaasha waxay kaloo leeyihiin qiimo kala duwan qiimaha adeegyadooda.
12. Ubaxa iyo shimbirta shimbiraha loogu talagalay gabdhaha dhabarka
Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad waqti qaadatid si aad u baartid waxoogaa internet ah si aad u hesho qiimo qumman oo ah tattoo dhabarka sida quruxda badan.
13. Shimbiraha hodanka ah ee sawir-maskaxda ku dhaji fikradda gabdhaha dhabarka
Tattoo ku yaala dhabarka ayaa noqon kara wax kasta oo qof kasta oo doonaya in uu ku dhufto # ku shaqeyn karo. il image
14. Nasiib darro naqshadeynta qurxinta
15. Fikrado farshaxan oo qurux badan oo sawir qurux badan loogu talagalay gabdhaha dhabarka
Ma jeceshahay naqshadahan? Waxay kugu haboonaan kartaa si fiican haddii aad dhab ahaantii rabto in aad leedahay naqshad cajiib ah dhabarkaaga. il image
16. Fikradda tattoo jilicsan ee gabdhaha dhabarka
17. Naqshadeeyaha naqshadeynta jilicsan ee ubaxa sawirada macaamilada
18. Dharbaaxo galmo ah oo lagu dhejiyo naqshadaynta gabdhaha
19. Fikradda sawir-qaadashada sawir-maskaxeedka ee gabdhaha dhabarka
20. Wareeyska bakeeriga iyo sawirka taatuuga ah ee loogu talagalay gabdhaha dhabarka
21. Fikradda dhogorta ubaxeed ee loogu talagalay haweenka dhabarka
Waxaa jira siyaabo aad ku dhejin karto tattoo-gaaga mid aad u fiican marka aad doorato qaabka, qaabka, naqshadeynta iyo midabyada si aad u xoojiso qaybta jirkaada ee aad rabto in aad qurux badan tahay. il image
22. Fikradda naqshadeynta quruxda badan ee qurxinta
Qaybta jirka ee aad dhigto tattoo-gaaga sidan oo kale waa wax walba oo muhiim ah markaad rabto il image
23. Qalabka sawirada sawir-jilicsan ee jilicsan ee loogu talagalay gabdhaha
Ubaxa waa had iyo jeer qurux badan oo loo isticmaalo sida tattoo. Si aad ubaxdo ubax aad u qurux badan oo qurxoon, isticmaalka tattoo dhabarka waa meesha ugu fiican ee loogu talagalay. Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad wax badan ka hadasho ku saabsan tattoo-gaaga maxaa yeelay tattoo-keeda oo keligiis ayaa kuu hadla. il image
24. Dheemanka dhabta ah iyo naqshadeynta naqshadeynta naqshadaynta ee gabdhaha
Weligaa ma fahmi kartid awoodda dhar-gooyska marka laga reebo inaad aragto qaar ka mid ah kuwa quruxda badan sida tan. Inkasta oo, waxay daboolaysaa dhabarka, wali way qurux badan tahay in la arko. il image
25. Tartoo-boodhka biyaha ee ku yaala dhabarka ayaa keena muuqaal foxy
Raggu waxay jecel yihiin boodhadhka dheriga si ay uula socdaan si qumman oo qarsoodi ah
Tags:gadaal u laabo
Tattoos Wadnahatattoo indhahashaatiinka shiidantattoos saaxiib saxa ahsawirrada raggamuusikada muusikadatattooslibto libaaxJoomatari Tattooswaxay jecel yihiin tattoostattoos qabaa'ilkaTartoo ubax badanjimicsiga bisadahaTilmaamta jaalaha ahtattoos sleevetattoo dheemansawir gacmeedtattoos gacantatattoo maroodigatattoos qosol lehku dhaji tattoosnaqshadeynta mehndiDhaqdhaqaaqalammaanahatattoo biyo ahtattoos eaglegadaal u laaboTattoo infinitytattoo tilmaanshimbir shimbirtattoos moontattoos qoortagaraacista gacmahafikradaha tattootattoos cagtacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos taajkiitattoos qorraxdasawirada malaa'igtasawirada gabdhahatattoos ubaxTattoo Featherarrow Tattookoi kalluunkalaabto laabtataraagada kubbaddatattoo ah octopustattoos iskutallaabtawaxaa la dhajiyay tattooshenna tattoo